शनिवार, श्रावण ३१, २०७७ १२:४६:२३
बुधवार, माघ १५, २०७६ गोबिन्द रोस्यारा
धनगढी -बिगत लामो समय देखी सुदुरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालय र सेती अञ्चल अस्पताल बिच दोहरी चलेको छ । त्यसले मिडियालाई पनि गज्जबको मसला बनेको छ । विकिपिडियाको यो एक स्वतन्त्र विश्वकोश हो जसलाई सबैले सम्पादन गर्न सक्दछन् । नेपालमा सन् २००२ मा विकिपिडियाको नेपाली संस्करण सुरू गरिएको हो । तर विकिपिडियामा सेती अञ्चल अस्पतालको बारेमा केही पनि भेटिन्न । भेटिनु पर्छ भन्ने त होइन तर यती धेरै पुरानो अस्पतालको बारेमा अहिलेको प्रबिधीमा चासो राख्नेको लागी जिज्ञासा हुनु भने स्वभाबिक हो । सन् १९६४ मा नेपाललाई प्रशासनिक रुपमा १४ अञ्चल, ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएपछि स्वास्थ्य सेवामा पनि क्षेत्रियकरण सुरु भयो । यसैपछि विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, वीरगन्ज, बुटबल, पोखरा र नेपालगन्जमा क्षेत्रीय अस्पताल स्थापना भए ।
स्पेसियालिटी हस्पिटलको सुरुवात (१९७५–१९९२)
यसअवधिमा स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना गरिए । ललितपुरमा मानसिक अस्पताल र त्रिपुरेश्वरमा आँखा अस्पताल खोलिए । दीर्घकालिन स्वास्थ्य योजना तयार पारियो भने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यान्वयन गरियो । ओखलढुंगा, काभ्रे, रामेछाप, रोल्पा, डोल्पा, हुम्ला, स्याङजा, मुगु र कालिकोटबाहेक देशका अन्य जिल्लामा समुदाय स्तरमा ७७५ वटा हेल्थपोष्ट स्थापना गरिनुका साथै जिल्ला अस्पताल र त्योभन्दा पनि ठुला स्तरका अस्पताल खोलिए ।विर्तामोड अस्पताल, कैलाली अस्पताल र कन्चनपुर अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी अन्चल अस्पताल बनाइयो भने गण्डकी अन्चल अस्पताललाई पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अस्पताल बनाइयो ।
सेती अञ्चल अस्पताल १९९७ मा जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्थापना भएको र २०४० सालमा अञ्चल अस्पतालको रुपमा सरकारले बिकास गरेको हो । अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा छ । यस क्षेत्रको पुरानो अस्पताल हो दैनिक हजारौले सेवा लिने गरेका छन् । र नागरिकको अपेक्षा पनी धेरै हुनु स्वभाबिक हो ।
सामान्य नागरिकको अपेक्षा के होला सेती अञ्चल सरकारी अस्पतालबाट । मैले बुझेको नागरिकले सस्तोमा सहज उपचार पाउनु नै हो । उपचार गर्दा कुनै झन्झट नहोस अहिलेका मेसु हेमराज पाण्डे जि पनि बिरामीले खोजेको बेला सजिलै भेटिउन् । अस्पतालमा ५० बेड नेपाल सरकारले स्वीकृत अनुसार चलेको छ भने ७५ बेड बिकास समितीले सन्चालनमा ल्याएको छ ।
तर अहिले अस्पतालमा २४० सम्म बेड सन्चालनमा छन् । सरकारको स्वीकृत बेड अनुसारका नै डाक्टरको दरबन्दी हुने नै भयो । अस्पातल सँगै सबै प्रकारका बिशेषज्ञ डाक्टरहरु पनि तर तिनले नियमिती सेवा दिन्छन कि दिँदैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हुन आउंछ ।
करिब १५— १६ महिना अस्पतालका मेसु बनेका डा. हेमराज पाण्डेले अस्पतालमा सुधारको प्रयास नगरेका पनि होइनन् । तर उनको स्वभाव अली सजिलै सबै सँग घुलमिल नहुने खालको पनि हो । र उनी आफुलाई लागकेको कार्य गर्न धेरै राजनितिक निर्देशन कुरेर नबस्ने डाक्टरको रुपमा उनलाई नजिकवाट चिन्नेहरु बताउँदछन् । अर्को कुरा पनि बिर्सन हुँदैन उनी सरकारी डाक्टर हुन तर उनको प्रत्यक्ष निगरानीमा सन्चालित निजी क्लिनिक धनगढीको सर्वाधिक बिरामी चेकजाँच क्लिनिक पनि हो । बिहान साझँ र परिआएको बेला दिउँसोको समयमा पनि उनी आफ्नो निजि क्लनिकमा भेटिन्छन् । प्रदेश सरकार मातहतमा आएपछि प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले सो अस्पातलको लागी पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ ।
पर्याप्त पैसा दिने सरकार अस्पताल सुधार गर्न खोज्ने मेसु अनि समस्या कहाँ छ त ? नागरिकले नबुझेको प्रश्न यहि हो । अस्पताल ब्यबस्थापन समिती पनि सरकार कै निकाय हो उसले पनि अस्पताल कै हकहितमा काम गर्नु पर्दछ । सरकारलाई अटेर गरेर अगाडी बढन खोज्दा मेसुको लागि पनि पक्कै राम्रो होइन । समस्या आएको कुरो त मेसुले सरकारलाई राख्ने हो तर उनी पनी घुमाउरो पाराले सरकार सँग पैठो जोरी खोजिरहने हो भने त झनै समस्या बल्झीरहने देखिन्छ । तर अब सधैंभर यँहाका जनताले सेती अञ्चल अस्पतालको नाम मात्रै भजन गरी रहने हो कि पहाडी तिर रहेका जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नती पनि गर्ने हो ।
सबै जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पतालहरुमा सबै सेवा सुबिधा दिने हो भने त सेती अञ्चल अस्पतालमा यसरी अनेक लफडा गरिरहनु नै पर्दैन । तर सरकारले त्यता दिन धेरै समय नै लाग्ने देखिन्छ र अहिलेको अञ्चल अस्पतालको समस्या बल्झीरहने देखिन्छ । नेपालमा राजनितीक दलहरुले आ आफ्नो पार्टी त चलाए त देशको ब्युरोक्रेसी भने ठीक तरिकाले चलाउन सकेका छैनन् । जसको परिणामा अहिलेको दुई तिहाई सरकारलाई पनि ब्युरोक्रेसी ठिक तरिकाले चलाउन हम्मे हम्मे परेको छ ।
कर्मचारीले पनि फेरी ठिक तरिकाले काम गर्नुको साटो राजनिति गर्नु वा अरु कुनै दलको इशारामा चल्नुले पनि सरकारी वा सेवा प्रदायक कार्यालयमा समस्या आईरहन्छ । राम्रो गर्ने मेसुलाई राजनितिक आस्थाको आधारमा हटाउन खोज्ने सरकारको रबैया हो भने त्यो पनि गलत हो तर सरकारले सजग गराउंदा पनि हटाउन थाल्यो भनेर मिडियाबाजी गर्न खोज्नु पनि मेसुको राम्रो कार्य होइन ।
अहिलेको प्रबिधी र मिडिया अझै सामाजिक सन्जालको युगमा संघ संस्थामा गरेको नितिगत भ्रष्टाचार लुकाएर लुक्ने कुरो होइन ढिलो चांढो बाहिर आउँछ नै त्यसैले राम्रो काम गर्नेले डराउनु पर्दैन सरकार भन्दा माथि नागरिक पनि छन् भन्ने कुराको ख्याल गर्नु पर्दछ । अहिलेका मेसु पाण्डे तत्कालिन समयमा मन्त्रालय कै आग्रहमा मेसु बनेका पनि हुन । त्यो बेला अस्पतालमा डाक्टरको अभाब र मेसु बन्न सबै डाक्टर तयारे नबनेपछि उनी मेसु बनेका हुन । तर पछिल्ला दिनहरुमा सामाजिक बिकास मन्त्रालय र मेसु बिच अबश्यक समन्वयको अभाबले जुन बिबाद बढदै गएको छ त्यो अझै बढदै जाने देखिन्छ ।
प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालय स्रोतले सेती अन्चल अस्पतालका मेसु पाण्डे आफ्नै तरिकाले चल्न थालेकाले समस्या हुन थालेको बताएको छ । अझ उसले त मेसु पाण्डे मेडिकल माफियाहरु सँग सर सल्लाहमा अगाडी बढने गरेको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयले अञ्चल अस्पतालको लागी सिटी स्कायान खरिद गर्न ८ करोड छुट्याएको भएपनी भौतिक पूर्बाधारको अभाबले सिटी स्क्यान खरिद गर्न नसकिने बरु सो रकम अरुतिर नै खर्च गर्ने मेसुले मन्त्रालयलाई जनाउ दिएपछि सामाजिक बिकासमन्त्री कृष्णराज सुबेदी थप आक्रोसित बनेका छन् ।
छिमेकी देश चीनले कोरोना भाइरस प्रभावितको उपचारका लागि एक हजार शैय्याको नयाँ अस्पताल हुवाङगाङ सहरमा अत्याधुनिक मेसिनहरुको प्रयोग गरेर रातारात अस्पताल बनाइएको छ । तर हामी बर्शदेखी सन्चालित अस्पतालको सही ब्यबस्थापन पनि गर्न सक्दैनौ भनेर अब नागरिकले त सोध्ने बेला आयो होइन र ।
सरकार सँग पैठोजोरी खोज्ने मेसु पनि उस्तै मेसुलाई निकाल्नु भन्दा पहिले नै हो हल्ला गर्ने सरकार पनि उस्तै । राम्रो काम गरेको छैन भन्ने लागेको छ भने सेती अञ्चल अस्पतालमा अर्को मेसु ल्याए भईहाल्यो त । मेसुले सरकार चलाउने होइन सरकारले मेसु चलाउने हो ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, माघ १५, २०७६, ०६:५४:००